Wasiirka arrimaha gudaha oo u safray si uu qalab ugu soo iibiyo booliska | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Wasiirka arrimaha gudaha oo u safray si uu qalab ugu soo iibiyo booliska
Wasiirka arrimaha gudaha iyo isku duwidda amaanka qaranka Joseph Nkaissery iyo xog hayaha joogtada ah ee wasaaraddiisa Karanja Kibicho ayaa ku sugan wadanka Urdun, halkaasoo ay u aadeen si ay uga soo iibiyaan gawaarida gaashaaman ee loogu tala galay in ay isticmaalaan ciidamada booliska ee dalka.
Labada sarkaal ayaa sidoo kale soo iibin doona qalab kale oo looga gol leeyahay in lagu xoojiyo awooda ay ciidamada amaanka u leeyihiin in ay ka hor tagaan ama la tacaalaan dhaqdhaqaaqyada kooxaha loogu yeero argagixisada.
Agaasimaha waaxda warfaafinta ee wasaaradda arrimaha gudaha Mwenda Njoka ayaa xaqiijiyay in Mr Nkaissery iyo saraakiil kale oo sar sare ay Jimcadii u ambabexeen Urdun si ay qalabkaasi usoo iibiyaan.
Tallaabadaan ayaa ka dambeysay markii uu dhawaan madaxweyne Uhuru Kenyatta ku dhawaaqay in markii ugu horeysay taariikhda dalka ay booliska howlohooda u isticmaali doonaan gawaarida gaashaaman oo horay ay u isticmaali jireen Milatariga oo kaliya.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in ay booliska heli doonaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaanno Helicopterada oo dheeraad ah.
Qalabka cusub ee lagu soo kordhinayo cududa ciidamada ayaa la filayaa in uu xoojiyo wax qabadka Laamaha kala duwan ee amaanka dalka, si ay u xaqiijiyaan yareynta falal dambiyeedyada.